Oge Ọgụgụ: 3 nkeji E nwere ọtụtụ ndị mara mma obodo na Europe, na ihe bụ ihe ọzọ, ọ bụ otú mfe ileta ha niile. Ejegharị ejegharị site okporo ígwè bụ a oké ụzọ ahụ ndị a ịwụ-ndepụta ebe. ebe a na- 3 European obodo kacha mma gara ụgbọ okporo. Edere isiokwu a ka ọ muta…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Mgbe atụmatụ a ezumike nke a na ezinụlọ, di na nwunye ma ọ bụ ìgwè nke enyi, ọ bụ mgbe ike na onye ọ bụla na-ekweta. Otu ihe ọ ga-adị mfe na-ekweta na, Otú ọ dị, bụ ma ịgbazite ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ oloko gaa. Nke a bụ ihe mere ụgbọ oloko ji ada bụ…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Ịzụ gbaa ụgbọ okporo ígwè na Europe bụ mgbe na-akpali akpali. Na mbụ, na Save A Train anyị na-mgbe na-achọ ala-eri gbaa ụgbọ okporo ígwè n'ihi na ị. Anyị enyochago isiokwu dị ka mma hotels na mara mma ụgbọ okporo ígwè njem. Ma kacha ekpo ọkụ ugbu isiokwu na ụgbọ okporo ígwè ụlọ ọrụ bụ…